Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSusan BV
Ikhabhathi ye-Bela Vista Spa e-Eaglereach. Ukubaleka kweNtaba yomlingo.
Nokuba ujonge impelaveki yothando, ikhefu elizaliswe lulonwabo kunye nabahlobo okanye ukubaleka kosapho, iBela Vista Spa Cabin e-Eaglereach yindawo enomlingo yokuphumla kunye nokuvuselela.
Imi phezu kweNtaba yaseGeorge, ngasentla kweVacy kwiNtlambo yaseHunter, iBela Vista ineembono ezimangalisayo phezu kwentlambo engezantsi nakumantla ukuya kwiNqophoma yeBarrington.
Le ndlu intle ye-spa bubutyebi obupheleleyo obubekwe kwindawo entle ye-Eaglereach Wilderness Resort ebandakanya ngaphezulu kwe-700 yeehektare zehlathi elicocekileyo lemveli.
I-Eaglereach yindawo esekwe kwindalo ekuchithelwa kuyo iiholide kwityholo lemveli elicocekileyo lokukhenketha kwendalo kwaye ineentlobo ngeentlobo zezilwanyana kunye neentyatyambo zendalo. Izilwanyana ezininzi zomthonyama zenze ikhaya lazo e-Eaglereach kubandakanya iKangaroos, Wallaroos, Wallabies, Echidnas, Goannas kwaye oko kuphambi kokuba ujonge esibhakabhakeni kwaye umangaliswe yiKing Parrots, iMpuma kunye neCrimson Rosellas, iiFiretails ezibomvu ezibomvu, iBlue Wrens, iBush Doves kunye namagama ethu. , uKhozi olumangalisayo olunomsila.
Kwabo bajonge ukuphuma baye kubona izinto zasekhaya, iHunter Valley Wineries kunye neBarrington Tops zingaphantsi kwemizuzu engama-45, kunye needolophu ezinembali ezingqongileyo zaseGresford, ePaterson, eDungog naseMorpeth.
Ilali yethu yasekhaya iVacy yimizuzu nje eli-10 yokuqhuba ukuya kumazantsi entaba yethu, inekhefi / indawo yokutyela, i-pub yelizwe kunye nevenkile eqhelekileyo yazo zonke ezo zinto ziyimfuneko.
I-Bela Vista yindawo ephangaleleyo, ebanzi yendlu "yokuziphekela" kwikhabhinethi ye-spa elala kamnandi isibini esinye okanye ezibini kumagumbi ayo okulala amabini ookumkanikazi. Igumbi lesithathu le-bunk lilongezelelo olufanelekileyo lwamaqela osapho ukuya kutsho kwabanye abathandathu abadala/abantwana abathandathu.
Indawo yokulala inikezela ngendawo yokuhlala yabucala kakhulu apho unokukhetha ukupheka ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo okanye i-BBQ kumgangatho obanzi okanye uzonwabisa kwiCafé kunye nePub yendawo.
Ukungena kwikhabhinethi uya kubuliswa ngesicwangciso esikhulu esivulekileyo sokuhlala kunye nendawo yokonwabisa enekhitshi eliphakathi. Kukho amagumbi okulala amabini amakhosikazi axhotyiswe ngokupheleleyo ngelinen, iitawuli kunye nezinto eziluncedo, kunye negumbi lesithathu lebhanti ukuba liyafuneka. Igumbi lokulala eliphambili lineensuite yalo kwaye kukho negumbi lokuhlambela eliphambili.
Phuma uye kwiveranda enkulu apho unokumangaliswa yimibono emangalisayo okanye uphumle kwindawo yethu ye-spa eshushu, uzisonge kwizitulo zomgangatho okanye amagumbi okuphumla atofotofo anencwadi elungileyo okanye ukonwabele nje utyelelo lwemihla ngemihla oluvela kwiiwallabies kunye neentaka ezintle. kumnyango wakho wangaphambili.
Ukuba ulonwabo lwangaphandle luyinto yakho, cela umngeni kubahlobo bakho kumdlalo wentenetya olandelwa lixesha lokudlala kunye nentenetya yetafile kwigumbi lemidlalo kwindawo yokuphumla, konke nje ukuhamba okufutshane ukusuka kwindawo yakho yokuhlala.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zibandakanya iqula lokuqubha, indawo yentenetya yezempilo & neziko lokuzilolonga, izitishi ezili-15 “ezisebenzayo”, iziko lokudlala labantwana, igumbi lemidlalo kunye nothotho lwamadama okuyabbying. IGoonarook Lagoon yenye indawo entle kakhulu yokuqubha, ukukhwela inqanawa kunye nomceli mngeni kwabo banenkathalo yokuphosa umgca wokuloba ezemidlalo. Ukomelela kwakho kukwakhathalelwa neziko lethu lokomelela langaphandle okanye uhambe uhamba ngeenyawo kwenye yeendlela zethu ezininzi zasehlathini.
I-Bela Vista ngokwenene iyindawo yokusinda encotsheni yentaba.
ILoji yethu imi kumbindi we Eaglereach Wilderness Resort.
IEaglereach yindawo esekwe kwindalo ekuchithelwa kuyo iiholide enehektare ezingaphezulu kwama-640 (259ha) zomhlaba wohambo lwendalo oluneentlobo ngeentlobo ezimangalisayo zezilwanyana nezityalo.
Izilwanyana zomthonyama ezenze iEaglereach likhaya labo ziquka; IiKangaroos, iiWallaroos, iiWallabies, iiEchidnas, iiGoannas kwaye oko kuphambi kokuba ujonge esibhakabhakeni kwaye umangaliswe ziiKing Parrots, iMpuma kunye neCrimson Rosellas, iiFiretails ezibomvu, iBlue Wrens, iBush Doves kunye namagama ethu, iWedge enkulu enomsila weKhozi.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ziquka iqula lokuqubha, indawo yentenetya yezempilo & nendawo yokomelela, i-15 station exersite, iziko lokudlala labantwana, igumbi lemidlalo kunye nothotho lwamadama e-yabbying.
IGoonarook Lagoon yenye indawo entle kakhulu yokuqubha, ukukhwela inqanawa kunye nomceli mngeni kwabo banenkathalo yokuphosa umgca wokuloba ezemidlalo.
Indawo ejikelezileyo inika umtsalane omangalisayo wasekhaya wokuziqhuba okanye ukhenketho olukhokelwayo. Oku kubandakanya izidiliya zasekhaya zaseHunter, iilali zembali ezifana neMorpeth kunye neGresford, kunye neBarrington Tops National Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Susan BV
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo nceda uqhagamshelane noSusan kwi (INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO) okanye i-imeyile (EMAIL HIDDEN)
USusan BV yi-Superhost